Qoryooley: Beero 40 hektar ah oo ku baaba'ay fatahaad
Qoryooley: Beero 40 hektar ah oo ku baaba'ay fatahaad
Roob xooggan oo toban maalin oo xiriir ah ka da’ayay degmada Qoryooley iyo Fatahaad uu sameeyay webiga Shabeelle oo isbiirsaday, ayaa sababay inuu baaba’o dalaggii ku beernaa dhul lagu qiyaasay 35 ilaa 40 hektar. Dalagga wuxuu isugu jiray galley, sisin, digir iyo dalagyo kale.
Xoghayaha maamulka degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha hoose ee maamulka Koonfur-galbeed, Ibraahim Malaaq Ibraahim ayaa Raadiyo Ergo u sheegay inuu ka mid yahay dadka beeraleyda ah ee ay saameystay fatahaadda. “Shakhsi ahaanteyda saddex hektar iyo bar ayaa iga baaba’day. Waxaa iigu beernaa sisin iyo galley,” ayuu yiri Ibraahim. Wuxuu beerta oo la abuuray labo bil kahor ku maalgeliyay lacag dhan $750 labo bil uun kahor. “Rajo weyn baan lahaa, laakiin wax ii badbaaday ma leh. Waa in aan markale lacag geliyaa haddii biyahu ka dhamaadaan,” ayuu yiri Ibraahim.
Haweeney beeraley ah oo haysata 8 carruur ah oo lagu magacaabo Ruqiyo Xuseen Xasan ayaa Raadiyo Ergo u xaqiijisay in beerteeda oo ka koobneyd afar hektar ay biyo buux dhaafiyeen, isla markaana ay ka baaba’een galley, sisin iyo khasab u beernaa. Waxay tiri “beerta waxaan ku maalgeliyay $500 oo aan soo deynsaday, haddana waxba kama haayo”. Ruqiyo waxay tilmaantay inay ka barakacday gurigeeda oo biyaha ay buux dhaafiyeen, isla markaana ay dulsaar ku tahay qoys kale oo isla degmada deggan.
Dhaqaalaha ay ka hesho beerta ayay ku maareyn jirtay nolosha qoyskeeda, balse hadda waxay ka shaqeysaa dhismaha guryaha carshaanta ah oo ay malaasto.
“Fatahaadda iyo biyaha roobka way isqabsadeen, kaddibna khasaaro ayay geysteen,” waxaa sidaas Raadiyo Ergo u sheegay Kuusow Xasan Cismaan oo ka mid ah beeraleyda ay saameynta soo gaartay. “Beertayda hadda biyo ayaa dhex fadhiya, galley iigu beerneydna way iga baaba’day,” ayuu yiri. Wuxuu intaa ku daray in isaga iyo 9 carruur ah oo uu dhalay ay nolol-maalmeedka ka soo saaran jireen beer 5 hektar ah oo ay uga baxday lacag gaareysa $1500.
Kuusow wuxuu sheegay in guryihii ku yaallay nawaaxiga suuqa xoolaha, suuqa khudaarta ilaa kawaanka Qoryooley looga guuray fatahaada. Ibraahim Malaaq ayaa isagana sheegay in qoysas lagu qiyaasay 150 ilaa 200 ay ku barakaceen fatahaadda iyo roobka maalmaha badan ka da’ayay Qoryooley.